Ọhụrụ Photo Mmezi | Site na Linux
Ọhụrụ Photo nkwalite
obi ike | | Aplicaciones, Imebe
N'ebe a, anyị ga-ekwu maka ọrụ amachaghị nke ọma, ngwa Photo, ọ bụ ihe onyonyo dị mfe na Qt, maka ndị na-achọghị nnukwu akụrụngwa mgbe ha na-ekiri onyonyo.
Onye edemede nke ngwa a bu kichin na anyị nwere ike ibudata ya na Ngwa Qt-Apps.
Mmezi agbakwunyere na nke ugbu a, Foto 0.7 bụ ndị a:
Ike ịgbanwe omume oke maka ihe ọ bụla
Enwere ike ịmegharị mkpịsị aka gaa n'elu
Njikwa, Alt na Mgbanwe enwere ike iji ụzọ mkpirisi
Ike bugharia onyonyo aka ekpe na aka nri
Mbugharị ka ezigbo nha
Kwụ na vetikal ịpịgharị
Na oru ngo page e a mgbanwe na nke ọ na-akọwa ihe atụmatụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ọhụrụ Photo nkwalite
Ngwa a di nfe ma di nma, otu m si amasi ya ehehe
Ndo ma adighi nma maka macahaha hahaha
xd na SW nke macaques bụ ahahaha n'usoro, mana mgbe m banyere chakra m ga-anwale, foto a bụ ehehe.
Ọ dị ezigbo mma, m nwalere ya mgbe m na-eji agụba-qt.Ugbu a ọ na-akwado gif, nke bụ ihe na-enweghị ya. Echere m na m nwere ike ịnweta desktọọpụ bụ isi na qt, mana ụfọdụ ngwa elementrị dịka pdf agụ na frontend maka isi zuru oke ka na-efu.
Okular anaghị egbo mkpa gị dị ka onye na-agụ PDF? : Ma ọ bụ
Ihe m na-atụ uche na KDE bụ ezigbo Nchọgharị Weebụ (Rekonq mkpọka n'ihi Flash na ọ bụ ezie na m kwenyere na mkpochapụ ya, ọ ka dị na ọtụtụ weebụsaịtị). Echere m na Calligra (Koffice 2, nri?) Ma enwere ohere iji meziwanye. Ọ ga - amasị m ịhụ LibreOffice na Gimp edere na Qt dịka ọmụmaatụ, mana hey, n'oge a n'akụkọ ihe mere eme, anaghịzi aba XD
Na ịjụ na enweghị xD m ga-ahọrọ ka KDE buru mmepe ya nwayọ, ana m ekwu nke a n'ihi ahụhụ na-akpasu iwe bụ ihe na-akpata mmepe nzuzu nke gburugburu desktọọpụ na-ewe.
-> Mmalite ma ọ bụ na-emechi mkpọchi agaghịzị ada ụda (ọbụlagodi na ọ kara akara na Notma Ọkwa Sistemụ yana, ỌD,, ndị ọkà okwu na xD).
-> KmenuEdit adịghị arụnyere na ndabara na KDE 4.8, Nnukwu njehie, ma ọ bụ dọọ gị aka ná ntị: / ị ga-eji aka wụnye ya.
-> Onwe ya, enwere mmetụta dị egwu nke kwụsịrị ịrụ ọrụ n'ihi ihu (ọ na-emekwa enyi m).
Mba mba, ihe n’eme na okular bu ngwa kde, a na m ekwu na qt na enweghi kde dependencies. Okular karịrị nke ọma.
Ee ee, ihe nchọgharị rekonq anaghịzi emebi nke ukwuu, mana ọ bụ ezughi oke, na ndị chakra emeela ihe gbasara libreoffice na qt, mana amaghị m ebe ọ dị.
M ga-enwe ndidi na calligra nke ka dị na beta, ma na-agbanwe ngwa ngwa.
Na Chakra, mgbe m jiri ya, ha nwere LibreOffice na-enweghị GTK dependencies, nke na-enweghị ịbụ Qt, ihe bụ ihe. Amaghị m ma Arch's AUR ga-enwe ụdị ahụ ...
Mana maka m, onye jiri KDE naanị ogologo oge, ihe dị mkpa bụ ihe nchọgharị na-enye m otu ihe ahụ dị ka Firefox. A na-etinye batrị ahụ na Firefox Qt.
Ma foto, aga m nwalee ngwa a. Ugbu a, m na-eji qiviewer dị ka onye na-ekiri ihe oyiyi, mana ị ga-emeghe iji gbanwee.
Ekwenyere m nke ọma n'ihe ị na-ekwu n'oge ọ bụla, echere m na KDE dị ukwuu n'ọtụtụ ụzọ naanị na ọ ga-enwerịrị mmekọrịta na ebumnuche doro anya.
Ngwọta nke nsogbu ụda gị na KDE 4.8 ... gaa na mmasị sistemụ> nkwupụta ngwa yana na igbe mmemme nke ihe omume ị họrọ ebe ọrụ KDE yana igbe egosiri na nseta ihuenyo a:
ị na-egosi ụzọ nke ụda nke ihe omume n'ụzọ dị otú a ... ya bụ, ị na-ama akara ụzọ zuru ezu site na itinye /// usr / share / ụda / n’iru ụda ọ bụla
Ihe ngosi ndi a a faenza?
Ha bụ Kfaenza: http://kde-look.org/content/show.php/KFaenza?content=143890
Ma ihe kachasị mkpa nke ụdị a ị naghị ekwu…. A sụgharịrị ya na Spanish by .. nke m !!!!
Ọ dịghị ihe dị ka "na gị?" site na ihe o gbara m ume ka m rụkọta ọrụ na nke ahụ bụ ya, Lukas zara m ozugbo ma ndị ọzọ bụ okwu nke ịsụgharị okwu ndị dị egwu site na ite nke ihe oyiyi, ihe na ihe.
Ọ ga-amasị m ịnye ndị Qt Linguist ụfọdụ echiche, mgbe ị na-ede otu obere okwu ahụ ugboro asaa ị ga-amalite ike gwụrụ, ụfọdụ izu ezu agaghị afụ ụfụ.
Echi m mezie post
Akwa, Amaghị m ya, ebe ahụ ka m lere anya ma ọ dị na repo.
KDE na Xfce Desktọpụ ndị kachasị ewu ewu na LinuxQuestion
Gụgharia na Linux n'iji DLNA